औषधी गर्न ३ बर्ष अघि हिडेका श्रीमान नफर्केपछि श्रीमान खोज्दै श्रीमति र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > औषधी गर्न ३ बर्ष अघि हिडेका श्रीमान नफर्केपछि श्रीमान खोज्दै श्रीमति र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस)
औषधी गर्न ३ बर्ष अघि हिडेका श्रीमान नफर्केपछि श्रीमान खोज्दै श्रीमति र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस)
admin November 23, 2021 भिडियो, समाज 0
एजेन्सी । नवलपरासीको बडहरा, मिलनचौकका मोतिलाल न्यौपाने करिव ३ वर्ष अघि अस्पताल जान्छु भनी घरबाट हिडेका थिए । नसा सम्बन्धि बिरामी मोतिलाल औषधि खान थालेको केही वर्ष भएको थियो ।
त्यही अनुसार घरबाट औषधि लिन जाने भनी बुटवल गएको उनकी श्रीमती नेत्रकलाले बताईन । तर औषधि गर्न भनी हिडेका श्रीमान घर नफर्किएको ३ वर्ष पुगिसकेकी उनी बताउँछिन । आफुहरुले सम्पुर्ण ठाउँ खोजी गरेको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म केही पत्ता नलागे पछि आफुहरु मिडियामा आएको उनले बताईन ।
सामान्य रुपमा सबै कुरा राम्रै परिवारमा चलेको र केही पनि खासै अभाव नभएकोले घर परिवारकै कारणले घर छोडेर हिडेको भन्ने ठाउँ नरहेको उनका छोरा कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । अहिलेसम्म आफुले थाहा पाए अनुसार घरमा तथा बाहिर बुबाको एक पटक पनि बिबाद नभएको र समाजमा पनि सबैसगँ राम्रो सम्बन्ध रहेको उनले बताए ।
अहिले समाजमा पनि यस्तो राम्रो मान्छे कसरी घर छोडेर हरायो भनेर सबै अचम्मित भएको उनले बताए । कसैले केही गर्यो कि भन्ने सबैले आशंका गरेको उनको भनाई छ । घरबाट बुटवल भनी हिडेको केही समय पछि फोन सम्पर्क गर्दा आफू अस्पतालमा लाइनमा बसेको र यहाँ काम सकिए पछि आफै फोन गर्ने भनी अन्तिम पटक त्यही नै कुरा भएको उनकी श्रीमतिको भनाई छ । आफुहरुले पनि बेलुकासम्म आउनुहुन्छ भनी अरु केही नसोचेको उनिहरुको भनाई छ ।
तर बेलुकासम्म घर पनि नआएको र सम्पर्क पनि नगरे पछि आफुहरुले फोन गर्दा फोनमा सम्पर्क हुन नसकेको उनिहरुले बताए । त्यसपछी आफन्तलाई भन्दा अब कतै बस्नु भयो कि भनी भोलि पनि सम्पर्क नभए खोजी गर्ने भनी त्यस दिन बसेको उनकी श्रीमतिको भनाई छ । तर भोलिपल्ट पनि मोबाइलमा कुनै सम्पर्क नभए पछि भने खोजि गर्न थालेको नेत्रकला बताउँछिन । स्थानीय छिमेकी सम्पुर्णले करिव १०/१५ दिनसम्म सबै तिर खोजी गरेको उनको भनाई छ ।
मोतिलाल हराएको भोलिपल्ट नै मोबाइलको लोकेसन हेर्दा त्रिबेणि सुस्ता तिर देखाएको उनका छोराको भनाई छ । त्यसपछी आफुहरुले उक्त स्थान सबैतिर खोजी गर्दा पनि केही पत्ता लगाउन नसकेको उनिहरुको भनाई छ । परिवारका सदस्य मात्र नभै सम्पुर्ण समाजले नै खोजिमा सहयोग गरेको उनको भनाई छ । उनिहराएको करिव १ वर्ष पछि भने उनको फोन लागेको उनिहरुको भनाई छ ।
१ दिन मात्र लागेको उक्त फोनमा एक जना तराईमुल को भाषा बोल्ने महिलाले फोन उठाएर यो आफ्नो श्रीमानको फोन हो भनी भनेको नेत्रकलाले बताईन । ती महिलाले भैरहवा बिमानस्थल नजिकै आफुहरुको घर भन्दै यो आफ्नै नम्बर भएको बताईन । तर उक्त नम्बर हेर्दा मोतिलालकै नाममा रहेको र कल लोकेसन हेर्दा भने ती महिलाले भनेको भैरहवा नभै देबघाट तिर देखाएको उनिहरुको भनाई छ । त्यसपछी भने उक्त नम्बर बन्द रहेको उनिहरुले बताए ।
टिकटकमा लाइभ आउनेलाइ भि’खा’री भनेपछि जयकिसन र नरनाथको ल’फडा (भिडियो हेर्नुस)
एमाले महाधिवेशन : यसरी गरिनेछ सुरक्षा व्यवस्थापन
भाग्य परिवर्तन हुनका लागि छोरी नै जन्मिनु पर्दछ : ज्योतिष !
मलेसियामा घोटिएर श्रीमतिलाइ स्टाफ नर्स पढाए, तर श्रीमति अर्कैसँग टाप!
सन्तानलाई संसार देखाउँने आमाहरु नै सँसारबाटै अस्ताएपछि…